Na Tsy Betsaka Aza Ny Fampiasana Ny Aterineto, Sakanan’i Borondi Ny Viber Sy Ny WhatsApp · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2019 2:30 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, বাংলা, Español, English
Ny Tranon'ny Gazety: toerana fiofanana. Sary an'i Charlotte Noblet, CC BY-NC-SA 2.0
Latsaky ny 2% amin'ireo mponina miisa 10,2 tapitrisa ao Borondi no mampiasa Aterineto, nefa tsy manakana ny governemanta tsy hanasazy akory izany. Tamin'ity herinandro ity, tanatin'ireo fihetsiketsehana, voalazan'ny tatitra fa voasakana ny WhatsApp sy Viber – fara faharatsiny tamin'ireo orinasa vaventy misahana ny serasera – tao amin'io firenena ao Afrika Atsimo-Atsinanana io.
Nanomboka tao Bujumbura renivohitra ireo fihetsiketsehana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, taorian'ny nanendren'ny antoko eo amin'ny fitondrana ny Filoham-pirenena Pierre Nkurunziza hitondra indray mandritra ny fepotoana fahatelo. Ho valin'ireo fihetsiketsehana ireo, andian-tafika no narantiranty tao an-drenivohitra ary notapahana ny fifandraisana an-tekefaona tamin'ireo onjam-peo tsy miankina, araka ireo tatitra azo. Olona maherin'ny 24 000 no nandositra ny firenena tamin'ny volana lasa teo.
Nahoana no mponina mpampiasa Aterineto izay tsy misy afa-tsy 200 000 monja no voaelingelin'ny fanasivanana an'ireo vovonana fifanakalozan-khevitra toa ny Viber sy WhatsApp? Ao anatin'ny fampiasana an'ireo vovonana ny fanalahidy: ireo no vovonana ahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana ao an-drenivohitra mifanerasera haingana sy manokana. Raha toa ny Twitter sy ny Blackberry Messenger no nalaza nandritra ny fitroarana ejiptiana tamin'ny taona 2011, nrona kokoa nankany amin'ny fampiasana ireo fampiasa malaza amin'ny fandefasana hafatra ireo Borondey, saingy nihidy
Na mety ho voalohany aza ny fisakanana ireo vovonana manokana ireo, tsy vaovao akory ireo fangejana fandraisana fitenenana ao Borondi. Tamin'ny taona 2013, napetraky ny governemanta ny lalàna iray mangeja ny asa fanaovana gazety, nnitakiana tamin'ireo mpanao gazety tao amin'ny firenena mba haka fahazoandàlana sy hamboraka ireo loharanom-baovao miafina mpamatsy azy ireo anatina trangan-javatra sasany, ary mametraka fepetra henjana momba ny votoaty mitaky amin'ireo mpanao gazety hamokatra fanadihadiana “volanjalanja”. Manome alalana amin'ny fanasivanana mialoha ihany koa izy, hanakanana ny famoahana izay rehetra manohintohina ny fiarovam-pirenena, ary mametraka sazy mavesatra ho an'ireo tonian-dahatsoratra sy ireo mpanao gazety izay mandika lalàna. Anbkehitriny ilay lalàna dia miatrika fanamby ara-pitsarana avy amin'ny Sendikan'ireo mpanao gazety ao Borondi sy ny Hetsika ho Fiarovana ara-pitsarana an'ireo Media.
Mampalahelo fa, mety ho anisan'ny firehana miitatra lavitra manerana ny tanibe ily fanasivanana farany tao Borondi. Raha mbola manohy ny fampiasany ireo lalàna manohitra ny asa fampihorohoroana i Etiopia mba hamelezana ny mpanohitra, i Tanzania kosa etsy andaniny vao avy nankato ny lalàna iray henjana dia henjana mikasika ny heloka bevava atao amin'ny aterineto. Niantso an'i Afrika Atsimo i Kenia mba “hanao zavatra” hanoherana ny heloka bevava atao amin'ny aterineto, izay nitarika ny BBC hangataka, vao tsy ela akory izay hoe: “Afaka hiady amin'ny heloka bevava atao amin'ny aterineto ve i Afrika sady hiaro ny zon'olombelona?”
Raha mbola andrasana ho hita izay ho valiny, manoro hevitra an'ireo afrikana mpamaky izahay mba hitsidika ny Surveillance Self-Defense an'ny Electronic Frontier Foundation, torolalana iray mikasika ny fiarovana an'ireo seraseranao ety anaty tambajotra, azo vakiana amin'ny dikanteny maro ankehitriny, anisan'izany ny teny Frantsay sy Arabo.
Navoaka voalohany teo amin'ny blaogy Deeplinks an'ny Electronic Frontier Foundation ny dikany iray amin'ity lahatsoratra ity.
Tantaran'ny Borondi farany
27 Desambra 2019Afrika Mainty
Burundi: Fihoarana ny fahasembanana mibadabada
02 Septambra 2019Afrika Mainty
Burundi : namely olona maherin'ny 5 tapitrisa ny tazomoka, ho an'ny tapany voalohany monja tamin'ny taona 2019
04 Jona 2019Afrika Mainty
Akon'i Zimbaboe: Nivadika tsimoramora ho mpanao didijadona ilay nantenaina ho mpanavotra